Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Dubai - Zagreb dia mitondra an'i Emirates sy flydubai miaraka
Nanambara ny Emirates sy ny flydubai fiaramanidina mpiaramiasa anio fa ny sidina eo anelanelan'i Dubai sy Zagreb any Kroasia dia hampiasan'ny flydubai manomboka ny 2 Desambra 2018 ka hatramin'ny 30 martsa 2019 ary avy eo ny sidina no hiasan'ny Emirates.
Nanambara ny Emirates sy ny flydubai fiaramanidina mpiaramiasa anio fa ny sidina eo anelanelan'i Dubai sy Zagreb any Kroasia dia hampiasan'ny flydubai manomboka ny 2 Desambra 2018 ka hatramin'ny 30 martsa 2019 aorian'izay dia ny Emirates no hiasa. Ity hetsika ity dia hiantoka ny fametrahana ny fahafaha-miasa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahita matetika ho an'ny mpandeha mandritra ny vanim-potoana ririnina. Ity dia maneho bebe kokoa ny tombotsoan'ny mpandeha amin'ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny seranam-piaramanidina roa monina any Dubai.
Mandritra io vanim-potoana io, ny sidina FZ1793 dia hiala ao Dubai amin'ny 10:00 ary tonga ao Zagreb amin'ny 13:15 ora eo an-toerana. Ny sidina FZ1794 miverina dia hiala ao Zagreb amin'ny 14:30 ary tonga any Dubai amin'ny 23:00.
flydubai dia hiasa ny zotra misy ny fiaramanidina Boeing 737 MAX 8 vaovao, izay manolotra mpanjifa traikefa an-dàlana nohatsaraina, toy ny seza fisaka ao amin'ny Business Class, ny seha-pianarana Economy Class farany, fialamboly an-tserasera amin'ny alàlan'ny HD touchscreens sy Sky Interior an'ny Boeing manerana an'i efitra.
Emirates sy flydubai dia hanohy hanolotra traikefa amin'ny dia izay taratry ny marika tsirairay avy. ny sidina flydubai Zagreb dia hiasa avy ao amin'ny Terminal 3 ao Dubai International (DXB), ahafahana mampifandray tsara ireo mpandeha manidina Emirates mankany amin'ny seranam-piaramanidina maoderina maoderina any Dubai.
Ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka Dubai dia manolotra safidy lehibe amin'ny safidy fitsangatsanganana amin'ny tambajotran'izy ireo mifameno, miaraka amin'ny codeshares mankany amin'ny toerana 90 sy ny maro hafa hanaraka. Ny fiaraha-miasa dia natomboka tamin'ny sidina codeshare nankany amin'ny tanàna 29 ary nivelatra haingana izany mba hihaona amin'ny fangatahana satria tsapan'ny mpanjifa ny tombony azo avy amin'ny fitomboan'ny fahaizan'ny sidina, ny fanitarana ny fidirana amin'ny toerana manerantany amin'ny tapakila tokana, ny fampifanarahana ny programa flyer matetika, ny fanamorana ny fizahana ao anaty entan'izy ireo hatrany amin'ny toerana farany, famindrana milamina mandritra ny fitaterana any Dubai sy maro hafa.
Ho an'ny famandrihana ambanin'ny codeshare, ny mpandeha an'i Emirates dia hahazo sakafo maimaimpoana ary ny Emirates dia nanamarina ny vola fanampiana amin'ny sidina ampiasain'ny flydubai na amin'ny Business na Economy.
Hatramin'ny nanombohan'ny sidina codeshare voalohany tamin'ny 29 Oktobra 2017, mpandeha 794,000 mahery no nahazo tombony tamin'ny fiarahamiasa Emirates sy flydubai.
Nitsoka ny fandikana ny Fahafatesana tany Iran fotsiny ve i Trump? Fiarovana ho an'ireo mpizahatany ao Iran?